"Ntughari nke umu ehi": àgwà, akụkọ ihe mere eme, ọnọdụ nke ijide na foto - Ugbo - 2019
Umu anu kachasi nke di n'ugwu Russia bu "Black Motley"
Ruo ogologo oge, a na-akpọ ehi na Russia nurse nọọsụ, ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke anụmanụ ndị a magburu onwe ya ka akụ na ụba nke ezinụlọ ndị ala ọgaranya kpebiri.
Kemgbe ahụ, ọtụtụ agbanweela, ma ozuzu umu ehi bu mmiri ara ehi bu ndi isi ulo oru ugbo.
Ọ dị mkpa karịsịa iji mara ụdị anụ ahụ na-acha oji na-acha ọcha, a na-ekesa ya na mba anyị, na Ukraine na Moldova.
Ihe ngosi nke Black Pestroy
Oge na nri
Ụdị akụkọ ihe mere eme
Na USSR kemgbe afọ 1931 ọrụ malitere na ịzụ ụmụ ehi dị elu. Ihe na-eme ka ụmụ ehi na-agba agba na-arụ ọrụ dị mma. Kostroma, Yaroslavl, Simmentalsky na ụmụ nwanyị na Dutch, Switzerland, anụmanụ Ostfrizian. Nsonaazụ ahụ dị mma.
Na 1959 nwa ehi na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha natara ọkwa nke ìgwè dị iche iche, 53% ìgwè anụ mmiri nke mba anyị bụ pestrus.
E nwekwara ụdị mmiri ozuzo ndị ọzọ mmiri ara ehidị ka: Jersey, Simmentalskaya, Ayshirskaya, Yaroslavskaya, Kholmogorskaya, Red Steppe.
Ndi nnochite anya ndi otu nwa ojii na agba motley, onye ọ bụla maka anụmanụ ọ bụla, elongated, obere ala, isi-sized isi nwere ogologo ihu ihu, mpi esiwo na njedebe, udiri bụ iko, iko azụ nke azụ azụ dị nso na ibe ya karịa n'ihu, akpụkpọ anụ ahụ dị mma ma na-agbanwe, ụkwụ dị ike.
Mba anyị dị oke ukwuu ma ọnọdụ ihu igwe dị n'ókèala ya dị nnọọ iche na ibe ya, n'ihi nke a, ọrụ ịzụlite anụ ugbo na-adabere na ụdị anụ ọhịa ndị a na-eme nke ọma na ọnọdụ ndị mmadụ.
Maka nke a a na-ekewa agba ojii na-acha ọcha n'ime ụzọ atọ: Central Europe, Ural, Siberia.
Na akụkụ dị mkpa mba Yaroslavl, Kholmogory, ụdị nke Kostroma jere ozi dịka ihe ndabere maka ọrụ ozuzu.. Ha na-ama oke site na nnukwu ibu na elu elu, ya mere, mgbe ha na ụmụ anụmanụ Dutch na Switzerland, ụdị ọhụrụ ahụ ketara àgwà ndị dị ịrịba ama, akwa arụpụta na oke elu.
Ncha nwere ike ibu ibu 1000 kg, ehi nnọọ obere - ruo n'arọ 650., a na-amụba ụmụ ehi buru ibu ma na-ebu ibu ruru 1000 grams. kwa ụbọchị. Nkezi nhazi arụ ọrụ si na 4 ruo 6 puku lita n'oge umuaka, abụba ndeksi: 3.5-3.7%;
Maka ozuzu Ural otu e weere ya Akpụkpọ anụ na-acha ọcha na-acha odo odo, Baltic nwa variegated na anụmanụ Ostfrizian. Mpụga nke ụmụ anụmanụ dị ntakịrị karịa ụdị anụ ọhịa Central Europe. Nkezi mkpụrụ nke kwa afọ ruo 5500 kg, ma ọdịnaya abụba - ruo 4%;
Ụdị Siberia nwa ojii na umuaka na-agba agba ụmụ amaala na-ahụkarị na ụmụ anụmanụ. N'ihi ọnọdụ ihu igwe siri ike, ndị nnọchianya nke ụdị ahụ dị obere, mana arụpụta ihe ha niile otu dị elu - ruo 5000 n'arọ. kwa afọma abụba ọdịnaya - 3.9-4%.
Ọrụ ịzụlite iji melite ìgwè ahụ na-aga n'ihu, a na - emeziwanye ihe ngosi, nkezi kwa afọ onye nnọchite anya ya mụbara ruo pasent 8.5 ruo puku lita kwa afọ n'agbanyeghị eziokwu ahụ mmiri ara ehi bara uru dịgidere, ruo 4%.
Foto "Black Motley" na-azụ ehi:
Ụdị ahụ nwere ahụike dị mma na ezigbo mgbanwe maka ọnọdụ ọhụrụ.mana enwere njirimara n'ime ọdịnaya, nke apughi ileghara anya:
Ime ụlọ ahụ maka ehi kwesịrị ikponwere ezigbo ventilashion;
Ntị! E kweghị akwụkwọ edemede.
N'oge oyi, ikuku ikuku ekwesịghị ịda n'okpuru ogo 5;
Ezi ọkụ na-akwado organism anụmanụ na arụsi ọrụ ike;
Ebere ekwesịghị igbochi ije ma mee ka anụ ahụ nwee nsogbu;
Imezi nchachaa oge - ihe di mkpa maka ihe ziri ezi.
Maka ibuwanye, mmepe na ibu, ịnọgide na-arụ ọrụ dị elu abụghị naanị ihe dị mkpa ọnọdụ njidekamakwa usoro doro anya. Nri na milking aghaghi ime n'otu oge.. Imebi ọchịchị na-eduga na ọnụ ọgụgụ nke mmiri ara ehi.
Enwere ikwu na mmiri ara ehi dị n'ire ya, na okwu ndị ọzọ, mmiri ara ehi na-adabere ma ehi anyị jupụtara. A ghaghị mesoo nri nke anụmanụ ahụ nke ọma. N'oge oyi ehi dị mkpa 3.5 n'arọ. hay kwa 100 kg. igwe. Maka nnukwu mkpụrụ ị ga-achọ nri dị nro na ọnụego 2 ma ọ bụ 3 n'arọ. kwa liter nke mmiri ara ehi.
Ntị! Inye nri beetroot na-eduga ná nsịemekarị ka ọnwụ anụmanụ ahụ nwụọ.
Na ihe achọrọ na mmiri nke mmiri ara ehi ga-achọ 150-200 grams. ntụ ọka ma ọ bụ bran, echefula banyere ncha - nnu dị mkpa, ma gbakwunye ya na nri na mkpụrụ akụkụ egosipụtara adịghị mma.
A na-etinye nri na nnu na nri nke okpomọkụ. - O nwere mmetụta dị mma na mkpụrụ mmiri ara. N'oge okpomọkụ, ehi na-enweta ihe niile ị chọrọ n'aka osisi, gụnyere vitamin ndị dị mkpa.
Na oge oyi ọdịnaya nke vitamin na nri na-esiwanye ike, n'ihi na ụgwọ ha kwụrụ ụgwọ ụlọ ọrụ na-arụpụta nri vitamin siri ike.
Maka ịchekwa mmiri ara ehi na-edozi ahụ, ị ​​gaghị echefu ha. Maka ezigbo ehi mgbaze chọrọ otutu mmiri.
Ọ bụrụ na ị na-ekpo ọkụ na-adịghị edozi ahụ, a ghaghị ịṅụ mmiri n'ụtụtụ na mgbede na mmiri ọhụrụ dị n'ime okpomọkụ ma ọ bụ dịtụ ọkụ.
Ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu choro ihicha ehi ahu nke nwere akwa oku. A ghaghị ime nke a iji mee ka ebe mkpuchi ahụ dị ọcha, iji mebie nje ndị nwere ike ime. Ọnọdụ ahụike nke anụmanụ na-adabere na ọnọdụ nke ụkwụ ya., ọ dị mkpa iji belata oge ha. Ntị! Ime ihe ngwa ngwa na imezu usoro mgbochi ga-ebelata ohere nke ọrịa.
Ụgha nke ehi na-acha ọcha na-acha ọcha bụ ezigbo ezi ahụ ike. Nke a bụ àgwà dị mkpa - mgbe ụmụ anụmanụ na - arịa ọrịa na - enweghị ike na - enweghị ike ịmepụta mmiri ara ehi na ọkwa dị elu, mana iji zere ọrịa niile n'ozuzu agaghị ekwe omume.
Nlekọta kwesịrị ekwesị, nri ziri ezi, ịgba ọgwụ mgbochi oge na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa. Mgbochi ọrịa dị ọnụ ala, na-ewe obere oge na mgbalị iji tụnyere ọgwụgwọ.
A na-ekewa ọrịa ehihie na abụọ: ọrịa na-adịghị emerụ ahụ.
Iji na-efe efe kọọ ọrịa na-ebute site na nje, bacteria, dịkwa ka usoro, na mkparụ ahụ nke akọrọ na ihe ndị dị n'ime ụlọ kpatara;
Iji abụghị ndị na-enweghị mmekọrịta ọrịa gụnyere ọrịa nke ụmụ anụmanụ na-eto eto, nsị, ọrịa nke akụkụ na usoro nke sitere na mmadụ.
Kasị egwu n'ihi na ehi bụ: nje ogwu, stomicitis, nkwonkwo spongiform, ọrịa ugbo na-efe efe, ọkụ ọkụ na Rift, nodular dermatitis, ọrịa, ụkwụ na ọrịa ọnụ. N'ihe banyere ọrịa na-efe efe, a mara ọkwa ndị na-edozi ahụ.
Ebe niile n'etiti ụmụ anụmanụ ụkwara nta, salmonellosis, leishmaniasis, trichomoniasis, leukemia, brucellosis, dermatofibrosis. Ozi anu ogwu nke mba na-eduzi nyocha ọbara iji chọpụta ụmụ anụmanụ na-arịa ọrịa, nke a na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa ntiwapụ ma na-echebe ndị na-eri ngwaahịa ndị na-aṅụ ara ehi site na ọrịa ndị ọzọ.
Ntị! Egbula ịchọta onwe gị ma ọ bụrụ na ị bụghị onye na-agwọ anụ. Gwa ọkachamara.
Iji nweta oke ehi na-emepụta ihe na ezi mmiri ara ehi na ihe mgbochi na-adọrọ adọrọ, ọdịdị ahụike dị mma nke ụdị ahụ, ụmụ ụmụ anụmanụ nwere àgwà ndị a chọrọ.
A na-ebute àgwà ndị a nile nke anụ ụlọ site na nne nne. Ọ bụrụ na ụmụ anụmanụ dị ole na ole, ọ dị mfe ịhọrọ nke kacha mma.
Na n'ime nnukwu ugbo, a na-edebe ihe ndekọ ndị ahụ ozugbo a mụsịrị nwa. A na-esite na ahụ ike na ìgwè na-eto eto, naanị ụmụ anụmanụ nwere ahụike na ihe nrịba ama nke nne na nna na-arụpụta nke ọma na-ekwe ka ha mụọ.
Inbreeding bụ ihe na-adịghị mma;
Nlekọta nke oke ehi na-acha ọcha na-adị mma, ụmụ anụmanụ egosila na ha nọ na nnukwu ụlọ, ebe ndị ọzọ na-ahụ nri, akwa yoy na-anọchi anya anụ ụlọ na-adịghị emepụta ihe. Ụdị oke a nwere oke ọdịnihu.
Ilekọta ụlọ maka ebuka
Ọrụ ebube - ọ ga-ekwe omume ịnye nwatakịrị ginger na afọ ole? Ntuziaka maka ọgwụgwọ ọgwụgwọ
Site na anụmanụ nye gị ma ọ bụ anụmanụ na-emegharị ahụ n'ahụ nwoke! Kedu ka oba nke nwamba na-esi dị egwu maka ụmụ mmadụ?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Umu anu kachasi nke di n'ugwu Russia bu "Black Motley"